Izinto ozozibona nokuzenza eMadrid ngezinsuku ezimbili | Izindaba Zokuhamba
Izinto ozozibona nokuzenza eMadrid ngempelasonto
USusana Garcia | | Spain amadolobha, Izindlela zokuphunyuka, Impelasonto, General, Madrid
Uma kunokuvakashelwa okucishe kube yinto yakudala, kufanele uye enhlokodolobha okungenani ngempelasonto. Ukuthi ngokunikezwa kwayo ngamasiko kungahle kube kuyindlala kakhulu, kuyiqiniso, kepha okungenani sizokwazi ukubona ezinye zezinto zayo ezithakazelisa kakhulu, izikhumbuzo eziyinsumansumane kakhulu nalezo zindawo esizwe ngazo.
Kukhona eziningi izinto ozozibona nokuzenza eMadrid ngempelasonto. Kungakho-ke kumele sibe nohambo olucacile, ukuze singachithi isikhathi sihambahamba noma sicabanga ukuthi sizoyaphi noma sizobonani. Singashiya izindawo ezimakwe kahle, ezisenkabeni, nakho konke okudingeka kwenziwe ngaleyo mpelasonto.
1 Yidla ukudla kwasekuseni njengeMadrilenian
2 Iqala ngeKhilomitha 0
3 UPuerta de Alcalá noCibeles
4 Phumula eRetiro Park
5 Yima ku-Triangle Yobuciko
6 Ithempeli likaDebod
7 Ake siyothenga
Yidla ukudla kwasekuseni njengeMadrilenian
Ngubani ongakaze ezwe ukuhalalisela nama-churros? Lapha bayisikhungo ngesikhathi sasekuseni, ngakho-ke kufanele uqale usuku kahle, njengoba benza naseMadrid. Bazohambisana noshokoledi oshisayo nekhofi. Enye yezindawo ezisenganekwaneni kakhulu yiSan Ginés, eduze nasePuerta del Sol, nayo evulekile unyaka wonke, amahora angama-24 ngosuku. Futhi ngekhulu le-XIX churrería endaweni yaseChamberí. Okuthile okuthengiswayo yiChocolatería Valor, kepha inezitolo eziningi eMadrid ngakho-ke kuyindlela enhle.
Iqala ngeKhilomitha 0
Lesi yisiqalo esihle sokubona idolobha namaphuzu alo athakazelisa kakhulu. EPuerta del Sol ungama kuKhilomitha 0 ukuze uqale ngokusemthethweni uhambo lwaseMadrid. Lapha ungathatha izithombe zesifanekiso se UBhele noMadroño futhi ujabulele isikwele esihlala sivela kuthelevishini kuNew Year Eve. E-Calle del Arenal uzofika eRoyal Palace nase-Almudena Cathedral, okuyindawo okwenzeka kuyo umshado wasebukhosini. Ezinye izikhumbuzo ezihlaba umxhwele futhi ezibabazekayo.
UPuerta de Alcalá noCibeles
Lesi ngesinye sezikhumbuzo ezinkulu kakhulu, ezinekhwalithi yokuba ndawonye nezinye izinto eziningi ongazibona. IPuerta de Alcalá ingelinye lamasango amahlanu asebukhosini ezikhathi zakudala avumela idolobha futhi akhiwa ngalo igunya likaCarlos III ngesitayela se-neoclassical esisikhumbuza ngalawo ma-arches wokunqoba amaRoma. Lesi sikhumbuzo esihle futhi siseduze nomgwaqo omkhulu onguthelawayeka maphakathi nendawo lapho sithola khona umfanekiso kaCibeles, okuyindawo okubanjelwa kuyo iqembu lebhola.
Phumula eRetiro Park
Leli paki lingenye yezindawo ezibaluleke kakhulu edolobheni kanye namaphaphu aluhlaza maphakathi nendawo. Kunezinto eziningi ongazibona kuwo, njengePaseo de las Estatuas, ezungezwe yizithombe ezinikelwe amakhosi aseSpain. Ungabona futhi i- Isikhumbuzo sika-Alfonso XII, ngesithombe senkosi samahhashi. Ngaphambi kwalesi sikhumbuzo kunesiziba lapho ungagibela khona isikebhe. Futhi bona ichibi laseCrystal Palace, kusukela ngekhulu le-XNUMX Yindawo lapho kufanele futhi uzivumele uhambe, uhambe futhi ujabulele ukuphumula kancane endaweni yemvelo maphakathi nendawo.
Yima ku-Triangle Yobuciko
Ukuvakashela iminyuziyamu yale nxantathu eyaziwayo kuyinto ebalulekile, ngoba kunemisebenzi yomlando. Lo nxantathu wakhiwa iminyuziyamu emithathu yedolobha, esondelene kakhulu, ne- Iminyuziyamu yasePrado, Thyssen noReina Sofía. Uma unentshisekelo ngokukhethekile kwezobuciko, into engcono kakhulu ongayenza ukuthenga iPaseo del Arte Pass cishe ngama-euro angama-26, wonga ama-20% entengo futhi isebenza unyaka owodwa kusukela ekuphumeni kwayo ukuvakashela iminyuziyamu. IPrado Museum iyibhentshi lamasiko omhlaba jikelele, elinemisebenzi emikhulu kaVelázquez, Goya noRubens. KuReina Sofía sizothola imisebenzi yobuciko besimanje, ngabaculi be-avant-garde kakhulu. E-Thyssen-Bornemisza sizothola igalari yobuciko egcwele imisebenzi yase-Europe.
Lesi yisikhumbuzo uhulumeni waseGibhithe asinikeza iSpain eminyakeni engamashumi ayisikhombisa ukusiza ukutakula amathempeli aseNubia. Yindawo eyingqayizivele eMadrid, ebuye ilungele cabanga ngokushona kwelanga okuhle kakhulu kusuka edolobheni. Okunye ukuvakasha okungaphuthelwa izithombe ezinhle ezingathathwa kuleli thempeli.
Ukuthenga enhlokodolobha nakho kuyinto yakudala nokuthile okungenakugwemeka. Imigwaqo efana neGran Vía, lapho kutholakala khona iPrimark yesibili ngobukhulu emhlabeni, noma iBarrio de Salamanca, ekhetheke kakhulu, igcwele izitolo okufanele uzivakashele. Uma uthanda nezisolo, ngeSonto awukwazi ukuphuthelwa ukuvakashela eRastro. Umzila waseMadrid Sekuvele kuyinto yakudala, indawo lapho ungathola khona zonke izinhlobo zezinto ezingamasekeni, kusuka kwifenisha kuya ezingutsheni nezinye izinto.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Izinto ozozibona nokuzenza eMadrid ngempelasonto
I-Old Jameson neGuiness Storehouse, ukuvakashelwa okubili ongeke ukuphuthele eDublin